सरुवा रोग जण्डिसबाट कसरी बच्ने ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
सरुवा रोग जण्डिसबाट कसरी बच्ने ?
जण्डिस धेरै प्रकारको हुन्छ । पब्लिक हेल्थमा अत्यन्त नै महत्वपूर्ण जण्डिस हो – इन्फेक्चुयस हाय्याटाइटीस अथवा इपिडेमिक जण्डिस । यस रोगको महामारीले गरीब मुलुकहरुलाई अझै पनि दुःख दिइरहेको छ । विकसित मुलुकहरुमा यो रोग फाट्टफुट्ट अर्थात् इन्दामीका रुपमा सदा देखापरिरहेको स्वीकार्नु पर्छ । यो रोग नेपोलियनको फौजमा पनि फैलिएको थियो । प्रथम विश्वयुद्धताक ब्रिटिश तथा फ्रेन्च फौजहरुलाई मेडिटेरियन आसपास यही जण्डिसले दुःख दिएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि सबै फौजी क्याम्पहरुमा स्यानिटेशनको पूर्ण पालना हुन नसक्दा जण्डिसका रोगीहरु पाइएको थियो ।
स्यानिटेशनको ज्ञान अनि यसको नियम पालना नगरीकन यस रोगबाट बच्न असम्भव नै हुन्छ । रोगीको दिशा–पिसाबबाट फोहोर भएको पानी, रोगी मान्छेले फोहोर हातबाट चलाएको, छोएको खानेकुरा । रोगीले खुल्ला त्याग गरिएको दिसा–पिसावमा बसी उडेका झींगाहरु, त्यसै फोहोर स्थानबाट आएका मुसाहरु साङ्लीहरु हाम्रो नछोपी खुल्ला राखेको तयार खानेकुरामा पसी खानेकुरा फोहोर गरिसकेको हुन्छ । पहिले–पहिले अस्पतालहरुमा रोगीबाट कन्ट्यामिनेटेट सिरिन्जहरुबाट जण्डिस रोग सर्ने गथ्र्यो । खानेकुरा, पिउने पानी, झीँगा वा साङ्ला जस्ता किरा, मुसा, कुकुर वा अरु कुनै पाल्तु जनावर, रोगीको फोहोर हातबाट यस्ता माध्यमलाई अलग्याउने काम हो स्यानिटेशनको । स्यानिटेशनको नियम पालना गर्नुहोस् तपाईलाई सरुवा रोग लाग्दैन ।
नेपालमा गर्मी महिनामा वर्षात्पछि हरेक साल जण्डिस रोग देखापर्छ । आयुर्वेदिक अस्पताल र यसका वैद्य राजहरुकोमा उपचार गराउन लाम लाग्दछन् । यो रोग अति नै सूक्ष्म भाइरस नाम जीवाणुबाट हुने हुँदा एलोपेथिक अस्पतालहरुमा र मेडिकल डाक्टरहरुले उपचार गर्दैनन् । रोगबाट निको हुन कमलपित्त एक महिना जति वेड रेष्ट गर्नुपर्छ र निको भएपछि । जीवनभर यस रोगको इम्युनिटी हुन्छ पुनः यो लाग्दैन । अत्यन्त नै महत्वपूर्ण कुरा यो रोग लाग्न सुरु हुनासाथ मलाई जण्डिस भयो भनी थाहा पाउनु जरुरी छ । लापरवाही गर्नु हुँदैन । सर्वप्रथम रोग लागि सकेपछि रोगीको वजन विस्तारै घट्छ । दिसा केही कब्जियत, रङ्ग फुस्रो, पिसाव रातो अनि आँखा पहेलो हुन्छ । सुरुमा रोगीले आफ्नो अवस्थाबाट परिचित नहुन सक्छ । काममा गइरहेको बेला कसैले ‘तपाईको आँखा त पहेलो छ’ भनेपछि झस्किन्छ । आफू कमजोर थकित भएको कुरा थाहा हुन्छ । यस अवस्थामा आफ्नो अवस्था थाहा नभइकन रोगीले अपच्य र अस्वस्थकर खानेकुराको साथै मद्यपान सेवनको कारण जन्डिसबाट साना–साना नानीहरुको मृत्यु समेत हुन सक्छ । वयस्क तथा युवायुवतीहरुलाई अल्कोहोलिक सिरोसिश हुने डर हुन्छ ।
यो रोग लागेको थाहा भएपछि रोगी सरासर घरमा गएर खाटमा आराम गर्ने, भरसक घरभित्र पनि हिडडुल नगर्ने । एक महिनासम्म आराम गर्ने । आफ्नो आँखा, दिसा–पिसाब र शरीरको अवस्था आफूलाई नर्मल लागेपछि मात्र काममा जाने । रोगी मान्छेले आफू बिरामी भई आराम गरी रहँदा निम्न कुराहरु नखाने । निम्नानुसार खाने ः
नखाने ः भुटेको, तारेको कुनै पनि खानेकुरा नखाने । भरसक नुनिलो र चिल्लो वस्तु नखाने । जाँडरक्सी र अल्कोहोलिक कुनै पनि पेय पदार्थको सेवन नगर्ने । कुखुराको मासु, खसीको मासुमा ज्यादा चिल्लो र बोसो पदार्थ हुने र मासु मात्र छुट्टयाउन गाह्रो हुने हुँदा नखाने । बोसो, छाला, आन्द्रा–भूडी, कलेजी, फोक्स आदि बिल्कुल खान हुँदैन ।
अत्यन्त राम्रो पौष्टिक पदार्थसहितको खानेकुरा खाने । हालसालको अध्ययन अनुसार, राम्रो र पौष्टिक आहारले मृत्युदर कम गर्ने र छिटो निको भई काममा जान सक्ने बनाउँछ । क्रिम, दुध तथा डेरीको राम्रो वट्टर र अण्डा बढी खानाले रोगीको फोक्सोलाई बचाउँछ भनी द रकफेलर इन्ष्टीच्युट फर मेडिकल रिसर्चबाट प्रकाशित भाइरल इन्फेक्सनस् अफ मेन नामक पुस्तकमा जनाएको छ ।
२०१५ सालतिरको कुरा हो, म सिर मेमोरियल बनेपा अस्पतालमा काम गरिरहेको थिएँ । बिहानदेखि ने.डा. स्टानली जी. स्टरजेशलाई नेपाली पढाउन जान्थेँ । अस्पतालको काममा पनि जान्थेँ । अस्पताल सुरु हुनुभन्दा अगाडि मिसनको सानो क्लिनिक थियो । यसभन्दा पनि अगाडि स्व. राजदास बादे श्रेष्ठको घरमा दिएको कोठाहरुको झ्यालमा जाली थिएन, हामी दुई जना मिलेर कार्पेन्टरीको काम गर्दादेखिको मित्रताले हामी धेरै नजिक थियौं । सिर मेमोरियल अस्पतालमा अचानक मेरो मेडिकल चेक अफ भयो र मलाई भन्नुभयो – ‘तिमीलाई इन्फेक्च्युयस हेपाटाइटीस जण्डिस रोग लागेको छ । कमलपित्त वेड रेष्टमा बस्नु’ भनी आफ्नै गाडीले मलाई घर पु¥याइदिनुभयो । जन्डिस रोगमा शरीरबाट प्रोटिनको खर्च हुने हुँदा प्रोटिन सप्लीमेन्टको लागि मैले राँगाको मासु मात्र अर्थात् लिनमीट उसिनेर बोसोरहित अवस्थामा दिनहुँ खान्थेँ । तारेको, भुटेको, नुनिलो कुनै पनि वस्तु मैले खाइनँ । प्रशस्त दुध दही, फलफुल आदि खान्थे र करिव ३–४ हप्ता मै म काममा सिरमेमोरियल अस्पतालमा फर्के ।